UNWTO: Njem nlegharị anya mba ụwa gbadara 70% na mpaghara niile
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » UNWTO: Njem nlegharị anya mba ụwa gbadara 70% na mpaghara niile
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mmachibido na njem ẹkenam omume Covid-19 ọrịa na-aga n'ihu na-aga zuru ụwa ọnụ na njem siri ike, na ọhụrụ data site na Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO) na-egosi ọdịda 70% na mbata mba ụwa maka ọnwa asatọ mbụ nke 2020.
Dabere na Barometer World Tourism Barometer kachasị ọhụrụ, ndị mbata mba ụwa dara 81% na July na 79% na Ọgọst, dịka ọdịnala ọnwa abụọ kachasị dị na afọ na elu nke oge ọkọchị nke Northern Hemisphere. Mbelata ahụ ruo Ọgọstụ na - anọchite anya ndị bịaranụ dị nde asaa ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 700 ma sụgharịa nfu US $ 2019 ijeri na mbubata nke mbubata njem mba ọzọ. Nke a nwere ihe karịrị okpukpu asatọ na-efu na azụ nke nsogbu ụwa na 730 na nsogbu akụ na ụba.
"Mbelata a na-enwetụbeghị ụdị ya na-enwe mmetụta dị egwu nke mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba, ma na-etinye ọtụtụ nde ọrụ na azụmaahịa n'ihe egwu," ka odeakwụkwọ ukwu UNWTO, Zurab Pololikashvili dọrọ aka na ntị. “Nke a na-egosipụta mkpa ọ dị mkpa ịmalite ngwa ngwa ịmalitegharị njem nlegharị anya, n'oge na-achịkwa ma na-ahazi”.
Mpaghara niile nke ụwa dekọtara ọnụ ọgụgụ buru ibu mbata na ọnwa asatọ mbụ nke afọ. Asia na Pacific, mpaghara mbụ na-ata ahụhụ site na mmetụta nke COVID-19, hụrụ mbelata 79%, na-esote Africa na Middle East (ha abụọ - 69%), Europe (-68%) na Amerika ( -65%).
Site na mmechi nke nwayọ nwayọ nke mba ofesi, Europe dekọtara obere ndalata na July na August (-72% na -69%, n'otu n'otu). Mgbake ahụ adịteghị aka, ebe ọ bụ na ebuteghachi mgbochi mgbochi na ndụmọdụ na etiti mmụba nke ọrịa. N'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, Asia na Pacific dekọtara ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu na -96% n'ime ọnwa abụọ ahụ, na-egosipụta mmechi nke ókèala na China na isi obodo ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ.
Ochicho nke njem ka adabatara nke uku n'ihi amagh i aga n'ihu banyere oria ojoo a na enwegh obi ike. Dabere na usoro ndị ọhụrụ, UNWTO na-atụ anya ka ọdịda zuru oke dị 70% maka 2020 niile.
Bolaghachi azụ na mba ụwa nke Q3 2021 tụrụ anya ya
Wlọ Ọrụ Ọkachamara UNWTO na-ahụ nlọghachi na njem nlegharị anya mba ụwa na 2021, nke kachasị na nkeji nke atọ nke 2021. Agbanyeghị, ihe dịka 20% nke ndị ọkachamara na-atụ aro nkwụghachi ahụ nwere ike ime naanị na 2022. A na-ahụ mmachi njem dị ka isi ihe mgbochi na-eguzo n'ụzọ mgbake nke njem nleta nke mba ụwa, yana njigide nje na-adịghị ngwa na enweghị ntụkwasị obi nke ndị ahịa. Enweghi nzaghachi a haziri ahazi n'etiti mba dị iche iche iji hụ na usoro nkwekọrịta kwekọrọ na mmachi achikọtara ọnụ, yana ọnọdụ akụ na ụba na-arịwanye elu bụ ndị ọkachamara gosipụtara dịka ihe mgbochi dị mkpa maka mgbake.